Yoomiif Qajeelchaa fiigicha mt 5000, Mohaammad Amaan mt 800n IAAF Diamond League Roomii injifatan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Yoomiif Qajeelchaa fiigicha mt 5000, Mohaammad Amaan mt 800n IAAF Diamond League...
Yoomiif Qajeelchaa fiigicha mt 5000, Mohaammad Amaan mt 800n IAAF Diamond League Roomii injifatan
Atleet Yoomiif Qajeelchaa fiigicha IAAF Diamond League guyyaa kaleessaa magaalaa Roomii Xaaliyaanitti geggeeffame moo’ate. Atleet Yoomiif injifannoo isaa kana kan mirkaneeffate daqiiqaa 12:58:39 itti fiigicha xumuruudhaan. Bara kanatti fiigicha mt 5000 daqiiqaa 13 gaditti kan raawwate tokko hinturre. Yoomiif Qajeelachaa, dargaggoo umrii 17, akka salphatti kana gochuu danda’eera.
Fiigicha mt 5000 kanaan atleetiin Keeniyaa Pool Tanu’iifi atleetiin Itoophiyaa Hagoos Gabrahiwoot wolduraa duubaan 2ffaafi 3ffaa ta’uun xumuraniiru.
Atleet Yoomiif Qajeelchaa Jimaata darbe Eugene Ameerikatti daqiiqaa 12:58:69n mt 5000 xumuruun injifatuun isaa niyaadatama. Fiigicha kaleessaatiin, magaalaa Roomitti, injifachuu qofa osoo hintaane sa’aa isaas fooyyessuu danda’eera. Torbee tokko keessatti injifannoo hangas gayu gonfachuun isaa atleet Yoomiif Qajeelchaa hangam kan abdiin irratti gatamu, tarii dhaalaa Qananiisaafi kanniin biroo, ta’uu isaa mirkaneessaa jira.
Guyyama kaleessaa, achuma magaalaa Roomiitti, fiigicha mt 800 taasifameen atleetin keenya beekkamaan Mohaammad Amaan moo’ateera. Mohammad Amaan daqiiqaa 1:43:56n fiigicha goolabuudhaan kan meedaaliyaa injifannoo mormatti dirate.
atleet mohaammad amaan
atleet yoomiif qajeelachaa
Previous articleQorannoo: Namoonni umriin 40 – 70 jidduu jiran woggaa 5 keessatti hiree du’aafi jiruu isaanii gargar baafachuu nidanda’u
Next articleQaroominni Aksumiifi kan Roomaa wolitti hidhata cimaa qabaachuu isaatiif ragaan argame